Tue, Jul 14, 2020 at 3:33am
मिर्गौला जाेगाउन यी ३ चिज तपाईँले छाड्नैपर्छ !
काठमाडौँ, ८ भदौ व्यस्त जीवनशैली र सही खानपान नहुनुको असर प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो स्वास्थ्यमा परिरहेको छ । पछिल्लो समय मुटुसम्बन्धी रोग, मोटोपना र डायबिटिजका साथै मिर्गौलासम्बन्धी समस्या पनि तिव्र रुपमा बढिरहेको छ । मिर्गौला स्वस्थ राख्न आवश्यक मानिन्छ रेनल डाइट । के हो रेनल डाइट ? रेनल डाइट यस्तो खाना हो, जसमा सोडियम, फस्फोरस र प्रोटिनको मात्रा केही कम हुन्छ । यस डाइटले रगतमा..
प्रधानमन्त्री पूर्ण रूपमा खतरामुक्त, यसरी हुँदैछ सिंगापुरमा उपचार
काठमाडौँ, ८ भदौ । करोडौं नेपालीलाई अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे निकै चासो छ । उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे धेरैले प्रश्नसमेत गरिरहेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो होला ?’ प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डा. दिलिप शर्माले भने सिंगापुरमा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपचार प्रक्रिया थालिएको र उहाको अवस्था सामान्य रहेको जानकारी दिए । डा. शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको सिंगापुरस्थित न्यासनल..
करेला: स्वाद तितो तर फाइदा मिठो !
काठमाडौँ, ७ भदौ खाँदा तीतो भए पनि करेला स्वास्थ्यका लागि अति लाभदायक हुन्छ । तीतो कतिपयलाई मन नपर्न पनि सक्छ तर करेला तीतो भए पनि महत्त्वपूर्ण औषधि सरह नै भूमिका निर्बाह गर्छ । तीते करेला स्वास्थ्यका लागि निक्कै फाइदाजनक हुन्छ। नियमित करेला सेवन गर्नाले हाम्रो शरीरमा देखिने विभिन्न खालका समस्याबाट हामी बच्न सक्छौ। करेला सेवनका फाइदाहरु बान्ता, हैजा आदि भएमा करेलाको रसमा थोरै पानी..
मानसिक तनाव खेप्नुपरेको भन्दै २२ चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
काठमाडौं, ६ भदाै । मानसिक तनाव खेप्नुपरेको भन्दै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका २२ जना चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । प्रतिष्ठानका चिकित्सक तथा कर्मचारीबाट बारम्बार धम्कीसँगै मानसिक तनाव खेप्नुपरेको उनीहरूकाे गुनासाे छ । प्रतिष्ठान दाङका २५ जनामध्ये २२ जना चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।चिकित्सकहरुलाई उपकूलपति डा. संगीता भण्डारीले बारम्बार अनुचित बहानामा स्पष्टीकरण सोध्ने, बर्खास्ती, धम्कीलगायत मनोबल खस्काउने खालका दबाब दिएका कारण शारिरीक..
काठमाडौँ, ५ भदौ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आज पुनः सिंगापुर गएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली थाई एयरबाट दिउसो साढे १ बजे सिंगापुरतर्फ गएका हुन् । यसअघि साउन १८ गते उनी स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर गई एक साताभन्दा बढी समयको उपचारपछि स्वदेश फर्किएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सिंगापुरस्थित नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार गराउने बताइएको छ। यसअघि पनि उनी सोही अस्पतालमा उपचार गराएर स्वदेश..
काठमाडौँ, ५ भदौ एक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र छात्राले अर्काे विद्यालयमा अध्ययनरत छात्र छात्रालाई आइपरेका समस्या समाधान गर्न गरेका प्रयास उदाहरणीय बनेको छन् । गौरीशङ्कर इङ्लिस बोर्डिङ विद्यालय बालकुमारी इमाडोलमा कक्षा १० मा अध्यययनरत छात्रा छात्राले सागर माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १० मा अध्ययनरत एक छात्रलाई गरेको सहयोग अरुका लागि अनुकरणीय बनेको छ । गौरीशङ्करका छात्र छात्राले आफ्ना खाजा खर्च कटाई एवं अभिभावकसित सङ्कलन भएको..
विराटनगर, ५ भदौ अन्धोपन न्यूनीकरणमा विराटनगर आँखा अस्पतालको सेवा उल्लेखनीय भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।सामाजिक विकास मन्त्रालय, नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय उपचार केन्द्र र विराटनगर आँखा अस्पतालद्वारा संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजित आँखा कान तथा पुनस्र्थापना वर्तमान स्थिति र भविष्यका रणनीति सम्बन्धी एकदिने गोष्ठी शुभारम्भका सो कुरा बताइएको हो । प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले गुणस्तरीय सेवाकै कारण..
काठमाडौँ, ५ भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्र्तगत विगत २६ वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति,अस्पताललगायतको एकीकृत सर्वेक्षण नहुँदा बिरामी र सेवाग्राही मारमा परेका छन् । समयसमयमा केही अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ( ओ एन्ड एम ) गरिए पनि एकीकृत तवरबाट हुन सकेको छैन । नेपालको निजामती सेवामा संगठन तथा जनशक्ति विस्तार तथा संकुचन गर्दा निश्चित आधारसहितको संगठन तथा व्यवस्थापन..
काभ्रेपलाञ्चोक, ४ भदौ मण्डनदेउपुर नगरपालिकास्थित वडा नं ७, ८ र ९ का बालबालिका कमलपित्त रोगबाट प्रभावित भएका छन् । सो रोगको प्रकोपले हालसम्म छ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिका प्रभावित भएका हुन् । विगत एक महीनादेखि कमलपित्तका कारण तीन वटा वडाका २७ बालबालिकाकोे उपचार गरिरहेको मण्डनदेउपुर नपा–८ का वडाध्यक्ष झलकप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विशेषगरी वडा नं ७ को कुन्ताबेंसी, ८..
उदयपुर जिल्लामा डेङ्गुको भय बढ्दै
गाईघाट, ४ भदौ उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिकासहित कटारी बजारमा पनि डेङ्गुको भय बढेको छ । एक हप्ताभित्र मात्र कटारी क्षेत्रमा डेङ्गुबाट २९ जनाभन्दा बढी प्रभावित भई बिरामी परेका छन् भने अन्य डेङ्गुबाट प्रभावित बिरामीसमेत अहिले उपचारको लागि कटारी अस्पतालमा आउने क्रम बढ्दै गएको बताइएको छ । अस्पतालका प्रमुख डा पवन साहकाअनुसार १५ श्ययाको कटारी अस्पतालमा अहिले डेङ्गुका बिरामीले अस्पतालका श्यया भरिभराउ भएपछि..
बाँकेको डुडुवा स्वास्थ्यचौकीमा सेवाग्राहीको बढ्दो चाप
नेपालगञ्ज, ४ भदौ बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकास्थित स्वास्थ्यचौकीमा अहिले सेवाग्राहीको चाप थामिनसक्नु भएको छ । दुई वर्षअघिसम्म वर्षमा नौ हजार बिरामी आउने सो स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रयोगशालासहितको उपचार सेवा निःशुल्क भएपछि वार्षिक २४ हजार बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् । स्थानीय तह गठनपछि सो गाउँपालिकाले आफ्नो मातहतको स्वास्थ्यचौकीमा २०७४ फागुनदेखि निःशुल्क प्रयोगशालासहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकाले सेवाग्राहीको चाप बढेको जनाइएको छ ।..
आनन्दवन अस्पताल तानियो विवादमा, नक्सा पासविना भवन निर्माण
काठमाडौँ, ४ भदौ । गोदावरी नगरपालिका–६ मा रहेको आनन्दवन अस्पतालले नक्सा पासविना भवन निर्माण गरेको रहस्य खुलासा भएको छ। सो अस्पतालको नयाँ बनेका भवनको नक्सा पास नभएको रहस्य खुलेको हो। अस्पतालले पाहुना घर, कर्मचारीका लागि आवासगृहलगायत ६ वटा भवन नक्सापासविना बनाएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। अहिले ट्रमा सेन्टर भन्दै अस्पतालले २५ करोड ७६ लाख रुपियाँको लागतमा भवन निर्माण गरिरहेको छ। भवन बनाउँदा..
डेङ्गु संक्रमणकाे उच्च जाेखिममा काठमाडाैं उपत्यका
काठमाडाैं, ३ भदाै । लामखुट्ट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङ्गु रोग काठमाडाैं उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा देखा परेको छ। डेङ्गी भाइरसका कारण हुने उक्त रोग प्रकोपकै रूपमा फैलिन सक्ने हुँदा तत्काल सतर्कता अपनाइनुपर्ने धारणा जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले राखेका छन्। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार काठमाडाैंमा मात्र करिब एक दर्जन व्यक्ति उक्त रोगबाट सङ्क्रमित भएका छन्। तर यो विवरण राजधानीका केही अस्पतालहरूबाट सङ्कलित सूचनामा..
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास, फेरि सिंगापुर जाँदै
काठमाडौँ, ३ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा समस्या देखिएपछि आउँदो शनिबार पुनः सिंगापुर जाँदै छन् । १२ वर्षअघि दिल्लीस्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्रीको रगतमा ‘क्रिएटिनिन’ को स्तर बढेको छ । ‘क्रिएटिनिन’ बढ्नुको अर्थ मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आउनु हो । सैनिक अस्पताल छाउनीमा स्वास्थ्य परीक्षणपछि चिकित्सकको सुझावअनुसार थप फलोअपका लागि प्रधानमन्त्री ओली गत साउन १८ गते सिंगापुर..
पोखरा, २ भदौ पोखरा महानगरपालिका–८ डेङ्गु सङ्क्रमण क्षेत्र हो । अघिल्लो वर्ष यही वडामा पर्ने शिवालय चोकबाट देखापरेको डेङ्गु यसवर्ष पनि सोही क्षेत्रमा डर लाग्दो रुपमा देखिएको हो । कास्कीमा यही भदौ १ गतेसम्म १०१ जना डेङ्गुका बिरामी देखिएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार भदौ १ गते मात्रै १६ जना डेङ्गुका बिरामी पोखराका विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । वडा नं ८..
डडेल्धुरा, २ भदौ परशुराम नगरपालिकामा झाडापखालाको महामारी फैलिएको छ । झाडापखालाबाट ६६ जना बिरामी परेका नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा उपसंयोजक हिक्मत धामीले बताउनुभयो । वडा नं ८ मा पर्ने जमरानी, गैरी गाउँ, गुप्टेगडाँ, सानुखोला लगायतका क्षेत्रमा शनिबारदेखि झाडापखालाको प्रकोप फैलिएको उहाँले बताउनुभयो । दुई जनाको जोगबुडास्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने एक जनालाई थप उपचारका लागि सेती अञ्चल अस्पताल धनगढी पठाइएको धामीले बताउनुभयो..
उदयपुरको तराई क्षेत्रमा फैलन थाल्यो डेङ्गु रोग
गाईघाट, २ भदौ उदयपुर जिल्लाको तराई क्षेत्रका भूभागमा केही दिनदेखि डेङ्गु फैलन थालेको छ । केही हप्तायता आएर जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रको बेलका चौदण्डीगढी, त्रियुगा नगरपालिकासहित जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रको कटारी क्षेत्रमा समेत डेङ्गु फैलन थालेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका अनुसार अहिले सबैभन्दा बढी डेङ्गु कटारी क्षेत्रमा फैलन थालेको र त्यसपछि क्रमशः त्रियुगा नगरपालिकाको गाईघाट र चौदण्डीको बेल्टार बसाहा तथा बेलकाको रामपुर..
काठमाडौँ, १ भदौ भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले स्थापना कालदेखि नै सस्तो तथा सुलभ ढङ्गले बिरामीको सेवा गर्दै आएको जनाएको छ । आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो अस्पतालको व्यवस्थापन समितिले दिएको जानकारीअनुसार अस्पतालले अर्बद रोगका बिरामीलाई रु एक लाखसम्ममा उपचार गर्दै आएको जनाएको छ । अस्पाताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठले १५ शय्याबाट शुरु भएको अस्पतालमा हाल १०० शय्या रहेको बताउँदै अरु अस्पतालमा..
काठमाडौँ, १ भदौ । सिरहास्थित मिर्चैया नगरपालिका–३ राघोपुरकी शोभादेवी चौधरीलोरी व्यथा लागेपछि परिवारका सदस्यले एम्बुलेन्समा लहान–३ अस्पताल चोकस्थित सुनिता श्रेष्ठको निजी क्लिनिकमा लगे। तीन छोरीकी आमा शोभा मिर्चैयामा अस्पताल भए पनि लहानमा भरपर्दो उपचारको आसमा आएकी थिइन्। उनले पहिला पनि नर्सिङ निरीक्षक श्रेष्ठसँग जाँच गराएकी थिइन्। त्यसैले उनी श्रेष्ठकै क्लिनिकमा आएकी हुन्। त्यहाँ आएपछि श्रेष्ठले मेरीगोल्ड हेल्थ पोलिक्लिनिक एन्ड डाइग्नोस्टिक सेन्टरमा पठाएको..
यस्ता लक्षण देखिए सोच्नुस् कलेजोमा केहि गडबढी छ
काठमाडौँ, ३२ साउन हाम्रो शरीरका लागि कलेजो निकै महत्वपूर्ण अंग हो । त्यसैले यसको स्वास्थ्यबारे हामी निकै सचेत हुनुपर्छ । तल दिइएका सात लक्षण देखिए कलेजोबारे समयमा नै सचेत हुनुपर्छः छाला चिलाइरहने हाम्रो छाला अत्यधिक चिलायो भने हामीले बुझ्नु पर्छ, कलेजोमा समस्या भएको हुनसक्छ । किनकि हाम्रो रगतमा कलेजो बिग्रिएर बाइल जम्मा भएमा हामीलाई अत्यधिक चिलाउँछ । छालामा विमिरा देखिनु छालामा ससाना फोका देखिएका छन् भने..
डेङ्गुको सङ्क्रमण : झुल टाँगेर उपचार, सचेत रहन डाक्टरको आग्रह
सुरुङ्गा, ३१ साउन । झापाको दमकमा तीन महीना अघि देखा परेको डेङ्गु रोग अझै नियन्त्रणमा आएको छैन । अहिले दमकका विभिन्न अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामीको सङ्ख्या १२० नाघेको छ । दमक नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख इन्द्र अर्यालका अनुसार दमक अस्पतालसहित आम्दा, लाइफलाइन, एडभान्स अस्पताललगायतमा डेङ्गुका बिरामीले उपचार गराइरहेका छन् । डेङ्गुको सङ्क्रमणले महामारीको रुप लिएपछि अहिले बिरामीलाई अस्पताल भित्र झुल टाँगेर राखिएको छ..
कस्तो छ प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य ? के भन्छ सचिवालय ?
काठमाडौँ, ३१ साउन । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य ठीक रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य ठीक छ, उहाँ भोलि शुक्रबार बिहानैबाट नियमित भेटघाट र बैठकहरूमा संलग्न रहनुहुनेछ । उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति निश्चिन्त रहन आग्रह गर्दै चासो राख्नुहुने सबै शुभचिन्तकमा धन्यवाद छ,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले बिहीबार राति ट्विट गरेका छन् । चिकित्सकले ओलीलाई आराम गर्न सुझाब दिएका छन् । ओली अस्वस्थ..
दमकमा डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्दै
दमक, ३० साउन पछिल्लो साता झापाको दमकमा डेङ्गुको सङ्क्रमण बढ्दै गएको देखिएको छ । तीन वर्षअघि दमकमा डेङ्गुले महामारीका रुपमा देखापरेको डेङ्गुको सङ्क्रमण यस वर्ष पनि अहिले ह्वात्तै बढ्दै गएको हो । दमक नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाप्रमुख इन्द्र अर्यालका अनुसार दमकको जिल्ला अस्पताल दमकसहित अन्य निजी अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामी भर्ना हुने क्रम बढेको पाइएको छ । सरकारी दमक अस्पतालसहित यहाँका आम्दा, लाइफलाइन, नमस्ते र..
प्रदेश ३ का १ सय २१ विद्यालयमा ‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रम विस्तार हुँदै
काठमाडौं, ३० साउन । प्रदेश ३ का १ सय २१ वटा विद्यालयमा 'एक विद्यालय एक नर्स' कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ। कार्यक्रमकी संयोजक नर्स मिलन घिमिरेका अनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी भएकाले १ सय १९ स्थानीय तहको १ सय २१ विद्यालयमा विस्तार गरिन लागेको हो। प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र छनोट कार्यक्रम हुँदै गरेको घिमिरेकाे भनाइ छ । यसका लागि प्रदेशले ६ बरोड ६५ लाख बजेट छुट्याइएको..
विराटनगर, २९ साउन प्रदेश नं–१ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले गएको वैशाखदेखि सुनसरीको धरानमा देखिएको डेङ्गुले प्रदेशभरिमा तीन हजार १५२ जना प्रभावित भएको बताउनुभएको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा विभिन्न सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफको क्रममा आज उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले डेङ्गु सुनसरीको धरानबाट फैलिँदै अन्य जिल्लामा विस्तार भएको र सुनसरीमा सबै भन्दा बढी तीन हजार २५ बिरामी रहेको बताउनुभयो । मन्त्री..
भक्तपुर, २९ साउन भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा अनियमितता भएको दावीसहित त्यसलाई रोक्न माग गर्दै भक्तपुर नगरपालिका वडा नं १ देखि १० सम्मका वडावासीले आज भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नगरवासीले अस्पतालमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई रोकेर अस्पताल सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गर्न नगरप्रमुख प्रजापतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्र बुझेपछि नगरप्रमुख प्रजापतिले क्यान्सर अस्पताल कुनै निजी व्यक्तिले खोलेको नभई..
हेटौँडा, २९ साउन । हेटौँडामा डेङ्गुले महामारीको रूप लिन थालेपछि नियन्त्रण अभियानमा आजबाट नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी सहभागी भएका छन् । हेटौँडाको पशुपति मन्दिर परिसरबाट ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधरण, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य, नेपाली सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका पदाधिकारी, नगर प्रहरीलगायत सयौँको सङ्ख्यामा स्थानीयवासी तथा सुरक्षाकर्मी बिहानैबाट लामखुट्टे नष्ट गर्ने अभियान ‘सर्च..
विहान खाली पेटमा तातोपानी पिउनुस्, सँधै स्वस्थ्य रहनुहोस्
काठमाडौँ, २८ साउन जापानी डाक्टरहरुको समूहले गरेको एक अध्ययनले तातोपानी स्वास्थ्यका लागि शतप्रतिशत फाइदाजनक भएको पत्ता लगाएको छ । हरेक दिन विहान खाली पेटमा करिब चार गिलास तातो पानी पिउनाले माइग्रेन, उच्च रक्तचाप, न्यून रक्तचाप, जोर्नी दुख्ने, एक्कासी मुटुको गती घट्ने बढ्ने जस्ता समस्यामा फाइदा हुने बताईएको छ । त्यस्तै क्यालेस्ट्रोल नियन्त्रण , खोकी, शारीरिक असहजता, आस्थामा, पिसाबसम्बन्धी रोग, नसा सम्बन्धी रोग, पेटको..
मकवानपुरमा डेङ्गुका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै
हेटौँडा, २८ साउन मकवानपुरमा डेङ्गुका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । हालसम्म डेङ्गुका बिरामीको सङ्ख्या बढेर १२४ पुगेको छ । साउन १० गते यहाँ डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको थियो । डेङ्गुबाट जोगिन लामखुट्टे नियन्त्रणको आवश्यकता छ । सरसफाइ तथा लामखुट्टे नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शशीकान्त सिंहले जानकारी दिनुभयो । बालबालिका, वृद्धवृद्धा, गर्भवती र सुत्केरीलगायत डेङ्गुबाट प्रभावित छन् । डेङ्गुबाट सबैभन्दा बढी..
Results 1452: You are at page 20 of 49